FAAH-FAAHIN: Al-Shabaab Oo Cagta Marisay Ciidamadii Ku Sugnaa Saldhigga Sanguuni Ee Duleedka Kismaayo - FOOLAAD MEDIA
Home » Wararka » FAAH-FAAHIN: Al-Shabaab Oo Cagta Marisay Ciidamadii Ku Sugnaa Saldhigga Sanguuni Ee Duleedka Kismaayo
FAAH-FAAHIN: Al-Shabaab Oo Cagta Marisay Ciidamadii Ku Sugnaa Saldhigga Sanguuni Ee Duleedka Kismaayo
Waxyar kadib markii la tukaday salaadda subax, waxaa ciidamo aad u hubeysan oo ka tirsan Xarakada Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka Jubbaland ku leeyihiin deggaanka Baarka ee duleedka magaalada Kismaayo.
Sida ay wararku tibaaxayaan weerarka waxaa lagu daah-furay Weerar Naf-hur ah oo si weyn looga maqlay jugtiisa meelo ka baxsan deggaanka Baarka, waxaana markaas kadib xerada u daatay ciidamada Al-Shabaab oo aad u hubaysan.
Dagaal culus oo faraha lagaga gubtay ayaa ka dhacay goobta, kaas oo dhex-maray ciidamada AlShabaab iyo kuwa maamulka Jubbaland ee Axmed Madoobe.
Dagaal muda socday kadib, waxay wararku xaqiijiyeen in xoogagga Al-Shabaab ay ku guuleysteen inay cagta mariyaan saldhigga, lana wareegaan gebi ahaanba deggaanka iyo xarunta milliteri ee ay duullaanka ku qaadeen.
Sida laga soo xigtay dadka deggaanka Maydadka ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan maamulka Axmed Madoobe ayaa daadsan gudaha xerada, waxaana deggaanka weli ku sugan ciidamada Xarakada Mujaahidiinta Al-Shabaab.
Sheekh CabdiCaziiz Abuu Muscab oo ah Afhayeenka ciidamada Xarakada Al Shabaab ayaa sheegay in ugu yaraan 27 askari ay ku dileen weerarkii ka dhacay Baar Sanguuni, saanad millateri oo fara badanna ay ku qabsadeen.
“Ugu yaraan 27 askari ayaa murtadiinta uga dhimatay howlgalkii ay Mujaahidiintu ku qaadeen maleeshiyaadka Murtadiinta ee Mareykanku uu dajiyay deggaanka Baar Sanguuni ee duleedka magaalada Kismaayo, waxaa kale oo jirta in mujaahidintu qaniimeysteen saanado melleteri oo cadawga saldhigga u yiillay” ayuu yidhi Sheekh Abuu Muscab
Maydadka ciidamo aad u farabadan oo katirsan maamulka Axmed Madoobe ayaa daadsan gudaha xerada, waxaana deegaanka weli ku sugan ciidamada Al-Shabaab.
Dadka deggaanka ayaa sidoo kale sheegay inay maqlayeen qaraxyo is xig-xigay iyo jugta madaafiic laysku weydaarsanayay xilligii dagaalku uu socday.
Wararka iyagana laga helayo Magaalada Kismaayo ee Xarunta Gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay sheegayaan in Cisbitaalka Magaladaasi la geeyey qaar ka mid ah Ciidamadii maamulka ee ku dhaawacmay weerarkaasi Al-Shabaab ku qaadeen Saldhiga Baar Sanguuni.
Cisbitaalka Weyn ee Magalada Kismaay oo dhaawacyadaas la geeyey ayaa waxaa isku-dayey in ay booqdaan oo ay Warbixino kasoo diyaariyaan si loo ogaado khasaaraha dhimasho iyo midka dhaawac ee dagaalkaas ka dhashay, balse waa loo diiday in ay galaan gudaha Cisbitaalka.
Wariyeyaal ku sugan Magalada Kismaayo ayaa waxay Radio Dalsan u sheegeen in Ilaalada Cisbitaalku ku wargeliyeen in marnaba aan la ogoleyn in Wariyaasha ay Cisbitaalka ka sameeyaan Warar ku saabsan dhaawacyada la geeyey Cisbitaalka.
Is-hortaaggan ayaa waxa uu ka marag-kacayaa jiritaanka khasaaraha baaxadda leh ee lagu warramayo in la gaadhsiiyey ciidamada maamulka Axmed-madoobe. Waxaanay maamulkaasi ku dedaalayaan sidii aan loo ogaan lahayn jabkaasi laxaadka leh ee dhabarka loo saaray.
Dhowr bilood ka hor ayaa deggaankan maanta lagu hoobtay waxaa si muquunin ah Maraykanku ku geeyeen Ciidamo Soomaali ah oo iyagu si gaar ah u tababareen, waxaana loo sheegay inaanay soo banayn karin difaacyada loo dhisay.
Tan iyo xilligaas, ciidamada Xarakada Al-Shabaab ayaa weerarro qorsheysan ku qaadayay deggaankan, waxaana mid ka mid ah howl-gallada ka dhacay Baarka lagu dilay askari Ameerikaan ah, iyadoo kuwa kalena lagu dhaawacay.